Kulankii U Horeeyay Oo Dhexmaray Madaxweynaha Cusub Axmed Siilaanyo Iyo Madaxweynihii Hore Daahir Rayaale | Araweelo News Network (Archive) -
Kulankii U Horeeyay Oo Dhexmaray Madaxweynaha Cusub Axmed Siilaanyo Iyo Madaxweynihii Hore Daahir Rayaale
Hargeysa(ANN)Madaxweynaha cusub ee Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, ayaa saaka kulan la yeeshay markii ugu horaysay tan iyo wixii ka danbeeyay dhawaaqii natiijada doorashada madaxweynii hore ee uu ka guulaystay Daahir Rayaale Kaahin.
Warar ku dhaw dhaw kulankaa oo ka dhacay qasirga madaxtooyada Somaliland ayaa u xaqiijiyay shebekada wararka ee araweelonews inuu ahaa mid booqasho gaaban ah, kaas oo ku kaabnaa salaan uu madaxweynaha cusubi ugu tegey madaxweynihii hore ee Somaliland Daahir Rayaale Kaahin oo weli xilka sii haya.
Kulanka Madaxweynaha Cusub iyo Madaxweynaha xilka sii haya oo qaatay waqti kooban ayaa la sheegay inuu gogol xaadh u ahaa kulan danbe oo ay yeeshaan ka hor inta aanay xilka la kala wareegin todobaadyada soo socda.
Madaxweynaha laga guulaystay iyo Madaxweyne Siilaanyo, ayaa warar shebekada wararka ee araweelo news heshay u sheegeen inay maalinta berito ah balameen kullan labaad, kaas oo la filayo inuu muddo saacado ah qaato oo ay labada hogaamiye iskaga xaal-waraysan doonaan arrimmo badan oo qaranka Somaliland khuseeya iyo sidii ay xilka ula kala wareegi lahaayeen.
Madaxeynaha cusub ayaa magcaabay shalay gudiyo kala duwan oo ka kooban saddex guddi, kuwaas oo hawlo kala duwan loo xilsaaray.